Child – Page4– Healthy Life Journal
ကလေးများတွင် တွေ့ရတတ်သည့် မူမမှန် သွားနှင့် ခံတွင်းဆိုင်ရာ အလေ့အထများ
ဒေါက်တာထွန်းထွန်းလင်း သွားနှင့် ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် အပြုအမူတစ်ခုကို ထပ်တလဲလဲ လုပ်ဆောင်နေတာကို အလေ့အထလို့ခေါ်ပါတယ်။ သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တဲ့ အလေ့အထနဲ့ မွေးရာပါ စိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ အလေ့အထဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ သွားနဲ့ ခံတွင်းကို ထိခိုက်စေတဲ့ မူမမှန်အလေ့အထတွေကတော့- (၁) လက်မစုပ်ခြင်း...
ကလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ . . .
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါဆိုတာ ကလေးတွေကို အချိန်ပေးဖို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို မုန့်ကျွေးရာမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ထမင်းကျွေးတာဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး သူတို့ကို စနစ်တကျကျွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလေးစားထားလိုက်ဆိုပြီး ထားပစ်ခဲ့လို့မရပါဘူး။ လူကြီးတွေအနေနဲ့ကြည့်ရင် နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ထင်ရပေမယ့် ကလေးတွေကို...
Healthy Life Journal အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ် Healthy Life ဂျာနယ်တွင် ကင်ဆာကုသအောင်မြင်ထားသူများ အကြောင်း လေးစားဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြပေးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများ၏စိတ်ထဲတွင်”ကင်ဆာဆိုတာ သေမိန့်” ၊ “ကင်ဆာဖြစ်ရင် ဆေးမရှိ”၊ “ကင်ဆာဖြစ်ရင် ဘဝနိဂုံးအချိန်ရောက်ပြီ” စသဖြင့် ယုံကြည် လက်ခံခဲ့ကြသည့်အတွက် ကင်ဆာအကြောင်းမသိလို၊...
အသက်ငါးနှစ်အောက်ကလေးများ အစားအသောက်ကျွေးခြင်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ ကလေးတွေကို အသက်ငါးနှစ်အရွယ်ထိ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတာတွေ့ဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ တချို့အမေတွေကျတော့လည်း ကလေးကို အသက်ငါးနှစ်အရွယ်ထိ နို့တိုက်တာရှိပါတယ်။ ဒီလိုကျတော့လည်း မကောင်းပြန်ပါဘူး။ မလိုပါဘူး။...
သင့်ကလေးငယ် အရွယ်အလိုက် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိရဲ့လား
၊ ငွေစင်ကြယ်ယံ ၊ ကလေးမွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ အရွယ်အလိုက် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိရဲ့လားဆိုတာ မိဘတွေစိတ်ပူကြတဲ့ အချက်ပါ။ အသက် သုံးလအရွယ်မှာ – မိခင်မျက်နှာ ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို လိုက်မကြည့်တာ၊ – အသံပေးပေမယ့် အမူအရာ ပြောင်းလဲမှုမရှိတာ၊ ခြောက်လှန့်သံပေးလည်း မလန့်တာ၊...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. မနှစ်က သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ဖူးသူတွေအနေနဲ့ ဒီနှစ်မှာ ပြန်ဖြစ်နိုင်ခြေများပါသလား ဆရာ။ ဖြေ. သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပြန်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ တစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ပြန်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ အဲဒီလို...
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အရိုးပျော့ရောဂါအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. အရိုးပျော့ရောဂါကို ဆေးပညာအရ Osteomalacia လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာလို ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ Osteo ဆိုတာကအရိုးပေါ့၊ Malacia ဆိုတာက ပျော့တာကိုပြောတာပါ။ အင်္ဂလိပ်တချို့ကတော့ Softening...
ရက်ပေါင်း တစ်ထောင်နှင့် မိခင်၊ ကလေး ကျန်းမာရေး
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးယူတော့မယ်ဆိုရင် မိခင်လောင်းတွေရဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်ကို သေချာဂရုစိုက်ပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မိခင်လောင်းလေးတွေဟာ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေ မွေးဖွားနိုင်ဖို့အတွက် Healthy Eating, Healthy Lifestyle...
ပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော်(အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ အရေပြားယားယံတဲ့အခါ ဘယ်လို လုပ်သင့်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ အရေပြားယားယံပြီဆိုရင် ဆေးကုဖို့ လိုရုံတင်မကဘဲ ဆေးလည်းစစ်သင့်ပါတယ်။ အရေပြားယားယံတာက ရောဂါတွေနဲ့ တွဲဖြစ်တတ်လို့ အရေပြားယားတာကို ပေါ့ပေါ့ဆဆမထားဘဲ ဆေးစစ်သင့်ပါတယ်။ သွေးစစ်တာ၊...
ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများ၏ လေ့လာနိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေမည့် အစာ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းမှာ သင်ယူလေ့လာနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ဖို့အတွက် အာဟာရရဲ့အခန်းကဏ္ဌက အရေးကြီးပါတယ်။ နံနက်စာ ကိုပုံမှန်စားတဲ့ ကလေးတွေက နံနက်စာကိုမစား သူတွေထက် ကျောင်းစာမေးပွဲတွေမှာ ရလဒ်ကောင်းကောင်းရရှိတာ၊ အပြုအမူကောင်းမွန်တာ နဲ့ တက်ကြွလွန်မှုလျော့နည်းတာတွေကို တွေ့ရတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။ အရေးကြီးလှသည့်နံနက်စာ...